Iprojekthi yakhe yokufota: Landela intombi yakhe kwihlabathi liphela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amaxesha ambalwa iprojekthi iyakwazi ukundishiya ndingathethi, andicingi ukuba ndifuna umntu kakhulu, kodwa kuyinyani ukuba namhlanje sinethuba lokubona zonke iintlobo zezindululo ngenxa yenethiwekhi yothungelwano. Ndiyibonile yonke into, ubuqili bobugqi, ukuphela kwexesha, iifoto zesurreal, imikhankaso yentengiso ephuma esandleni ... Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo le projekthi ndicinga ukuba ihambile. Umlinganiswa wethu ophambili, UMurad Osmann, umfoti waseRashiya oye waduma kwihlabathi liphela ngenxa yemifanekiso yakhe emihle kunye nokuthanda kwakhe.
Umzobi wethu uphakamisile landela intombi yakhe kwihlabathi liphela nangokoqobo. Iprojekthi yokufota ebonisa iimbombo ezintle zehlabathi zihlala zikhokelwa sisandla sakhe. Ngexesha elifutshane uye waba ngumona wezigidi zabantu: Uhlala esiya kwiindawo ezinomtsalane kwaye abelana ngazo nehlabathi ngothando lwakhe lokufota kunye nenkampani yeqabane lakhe, abonayo, uziva uthando olungenamiqathango. Ngaphandle kwalokhu, uMurad ubonakalisa ubuchule obungathandabuzekiyo. Usibonisile nje ukuba kusekho iiprojekthi ezinokusichukumisa kwaye zisibonise ukuba uthando, ubugcisa, ukufota kunye nokhenketho ayizenzelwanga zonke ezo zinto.
Apha ndikushiya iprofayile yakho ye-instagram ukuba ufuna ukulandela amanyathelo akhe kunye neesampulu zemifanekiso yakhe, nangona zininzi ngakumbi kwiprofayili yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iprojekthi yakhe yokufota: Landela intombi yakhe kwihlabathi liphela
Umbono ulungile, iifoto zilungile, kodwa ezinye zibonakala zibubuxoki (ukuthanda kwam kwenzeke ngeFotohop)
Inyaniso indothusile ..